Image from http://wwwdelivery.superstock.com
အံတိုနေပြီနော်..ဆိုတာကတော့ ဒီအကြောင်းသိနေတာကြာပြီ..လာမရွှီးနဲ့..လို့ဆိုချင်တာပါ။ အံဆုံးပေါက်ပြီဟေ့..လူကြီးဖြစ်ပြီ..လို့တချို့တွေပြောတာကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အံဆုံးပေါက်လို့..ဆိုပြီးပါးတွေရောင်ပြီးငိုနေရတဲ့သူတွေ၊ ပါးစပ်မဟနိုင်လို့ အစားမစားရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ပိုးနဲ့လူသားပို့စ်မှာ မေးထားတဲ့ ကိုThawna ရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရင်း
အံဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်း၊ သွားအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိပြီး၊ ဘ၀မှာနောက်ဆုံးမှပေါက်လို့ last molar ..တတိယမြောက်အံသွားမို့လို့ third molar ပညာတွေပြည့်စုံတဲ့အရွယ် (အထက်တန်းပညာနဲ့ဘွဲ့တစ်ခုရချိန်) အသက် ၁၇ - ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ ပေါက်လို့ wisdom toothလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ညီတွေညီမတွေအံဆုံးပေါက်လို့သူများမေးရင် wisdom tooth ပေါက်လို့ လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ လူရှိန်တာပေါ့..လက်တွေ့မှာတော့ အဲဒီအသက်အရွယ်ထက်နောက်ကျပြီးပေါက်တာတွေလည်းတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Anthropologists တွေရဲ့အဆိုအရ၊ ရှေးခေတ်ကလူတွေဟာ၊ သိကြတဲ့အတိုင်း အစာကြမ်းတွေအစိမ်းတွေ အမာတွေစားခဲ့ကြရပါတယ်။ မီးကိုတွေ့ရှိလာတော့မှ ချက်ပြုတ်စားတတ်တဲ့အဆင့်အထိတိုးတက်လာလိုက်တာ၊ အခုခေတ်ကျတော့ မာတာကြမ်းတာတွေသိပ်မစားကြတော့ဘူးလေ။ အစားဆိုပျော့မှ၊ ၀ါးလို့လွယ်မှ ဖြစ်လာပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကလူတွေဟာအစာကြမ်းတွေစားခဲ့ကြလို့ ၀ါးရဖန်များပြီး သွားအချင်းချင်း အပေါ်အောက်ဘေးတိုက်ပွတ်တိုက်မှုများတာကြောင့် attrition လို့ခေါ်တဲ့ကြွေလွှာပြုန်းပြီး drifting လို့ခေါ်တဲ့သွားတွေနေရာရွေ့ကုန်လို့ အံဆုံးပေါက်တဲ့အချိန်ကျတော့ အံဆုံးထွက်လာဖို့ နေရာ (space) အလုံအလောက်ရတဲ့အတွက် ပြဿနာမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာတာနဲ့အတူအစာပျော့တွေစားပြီးသိပ်မ၀ါးရတော့တဲ့အတွက် သွားနေရာရွေ့တာတွေသိပ်မဖြစ်တော့တာနဲ့အတူ၊ မေးရိုးကလည်း အရွယ်သေးလာပြီး၊ အံဆုံးပေါက်ဖို့နေရာမရတဲ့သူတွေများလာပါပြီ။
Image from American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
နေရာမရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့၊ ကိုရွှေအံဆုံးကစောင်းပြီးပေါက်တော်မူပါတယ်။ ပုံမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းရှေ့ဖက်ကိုစောင်းပေါက်တဲ့အတွက် ပြဿနာအမျိုးမျိုးပေးပါတယ်။ Last molar impaction လို့ခေါ်ပါတယ်။
(၁) တစောင်းပေါက်ပြီးရှေ့ဆက်မထွက်နိုင်တာကြောင့် အစာတွေက အံဆုံးနဲ့ဒုတိယအံသွားကြားမှာခံပြီး ခံတွင်းထဲက ပုံမှန်ပိုးမွှားတွေ (normal flora) ပွားများ၊ အဆိပ်တွေထုတ်ကြလို့သွားဖုံးရောင်ပါတယ်။ ပါးစပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရောင်လာရင် အရမ်းနာပါတယ်။ ပါးစပ်ဖွင့်ပိတ်လုပ်တာနဲ့ကို တအားနာပါတယ်။ ရောင်တာက မေးရိုးကြွက်သားတွေအထိရောက်သွားရင် ပါးစပ်ဟလို့မရတော့ပါဘူး။ ဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေသိကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် အောက်အံဆုံးပါ။ ပိုဆိုးလာရင် လူပါးဝလာပါတယ်။ ပါးပါရောင်လာတာကိုပြောတာပါ။
မကုဘဲထားရင်အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိဆိုးဝါးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်လက်လှမ်းမမီတဲ့နေရာမှာရောက်နေရင် အရေးပေါ်လုပ်သင့်တာက၊ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးသောက်တာ၊ ဆားရေပူနွေးနွေးနဲ့ တနေကုန်ပလုတ်ကျင်းပေးငုံပေးတာလုပ်ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသွားတဲ့သူတွေကတော့ဆေးတွေဝယ်ဆောင်သွားလေ့ရှိလို့ ပိုးသတ်ဆေးအကြောင်းပြောရတာပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ပိုးသတ်ဆေးတွေသောက်တာကို သိပ်တော့ အားမပေးပါဘူး။ ပြဿနာတွေရှိနိုင်လို့ပါ။ အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက ပါးပေါ်ကနေအရောင်ကျအောင်ဆိုပြီး မန်းဆေးတွေလူးတာ၊ ဆေးဖယောင်းချက်တွေကပ်တာ၊ ကျပ်ထုတ်ထိုးတာမလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေလုပ်ရင် ပြည်တွေက ပါးကိုဖောက်ပြီးထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အနာတော်တော်နဲ့မကျက်တော့တာ၊ အမာရွတ်ကြီးကျန်ခဲ့တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆားရေပူငုံလိုက်ထွေးလိုက်လုပ်ရင် ပြည်တွေပါးစပ်ထဲသွားဖုံးကတဆင့်ထွက်ပေါက်ရပြီး အမြန်သက်သာစေပါတယ်။ အဲလိုအချိန်မှာများများဝါးရလေ၊ အပေါ်အံသွားနဲ့ရောင်နေတဲ့အောက်သွားဖုံးနဲ့ထိပြီးပိုရောင်ပိုနာလေမို့၊ မ၀ါးဘဲမျိုချလို့ရတဲ့ ဆန်ပြုတ်စွပ်ပြုတ်တွေဘဲသောက်သင့်ပါတယ်။
(၂)အံဆုံးနဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒုတိယအံသွားကြားလွတ်နေတဲ့နေရာမှာညပ်ကျန်ခဲ့တဲ့အစာတွေကြောင့် ဒုတိယအံသွားကိုပိုးစားစေပါတယ်။ ပုံမှာကြည့်ပါ။ အနောက်ကနေတွန်းနေတဲ့ဒဏ်နဲ့အတူ ရှေ့ကအံသွားပိုးစားနေတာတွေ့ရမှာပါ။ အသုံးမတည့်တဲ့အနေအထားနဲ့ပေါက်လာတဲ့အံဆုံးကြောင့် အသုံးတည့်တဲ့ပုံမှန်သွားက ပိုးစား၊ စောစောစီးစီးမသိလိုက်တော့ ဒုတိယအံသွားပါ မဖြစ်မနေနှုတ်ရတဲ့အဆင့်ရောက်ရပါတယ်။ ကိုThawna ပြောတဲ့အခါင်းပေါက်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အထင် အံနှစ်ချောင်းကြားကလွတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်မှာစောင်းနေတဲ့အံဆုံးကိုအမြန်ဆုံးနှုတ်သင့်ပါတယ်။
(၃)တချို့တွေမှာ မပေါက်နိုင်ဘဲသွားဖုံးရိုးထဲမှာမြုပ်နေတဲ့အံဆုံးပတ်လည်မှာ cyst လို့ခေါ်တဲ့အရည်အိတ်ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းကြီးလာလို့မေးရိုးကိုဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။ ရှားတော့ရှားပါတယ်။
(၄)အံဆုံးစောင်းတဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး နှုတ်တဲ့အခါ လွယ်တာရှိသလို ခက်ခက်ခဲခဲခွဲစိတ်နှုတ်ရတာတွေရှိပါတယ်။ ငယ်တုန်း၊ အံဆုံးအမြစ်တွေမရှည်သေးခင်မှာနှုတ်ရင် အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ အသက် ၁၇ကနေ ၂၀၀န်းကျင်မှာနှုတ်ရင်၊ နှုတ်ရတာလည်းလွယ်တယ်၊ ရှေ့အံသွားကောင်းကိုလည်းပိုးစားတဲ့ဘေးကကင်းဝေးနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်မှန်စစ်ဆေးချက်အရနှုတ်ရခက်မယ်မခက်ဘူးကိုမှန်းဆနိုင်လို့၊ အထူးကုဆရာဝန်နဲ့မှ နှုတ်သင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး တဆင့်လွှဲပြီးသွားခိုင်းရင် အထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားဖြစ်အောင်သွားသင့်ပါတယ်။ မဖြစ်ဖြစ်အောင်နှုတ်ခိုင်းနေရင်၊ အခက်အခဲအနာတရဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှုတ်ရင်းရှေ့သွားကိုထိခိုက်မိတာ၊ သွေးလွှတ်ကြောပေါက်ပြီးသွေးထွက်လွန်တဲ့အန္တရာယ်၊ အာရုံကြောကြီးနဲ့အံဆုံးအမြစ်ကပ်နေတာကြောင့်အာရုံကြောထိခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနိုင်တာကြောင့် အထူးကုသွားနဲ့မေးရိုးခွဲစိတ်ဆရာ
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Wisdom tooth လို့ခေါ်တဲ့ အံဆုံးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ တွေ့မြင်ကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကျန်းမာသုခ ပြုံးအလှပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြပါစေ။
Posted by Dr. Nyan at 7:57 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုကြီးဥာဏ်. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျတော်လဲ အောက်အံဆုံးကပေါက်တော့မယ်ထင်တယ်။ နာလဲနာတယ်. ပါးစပ်ကလဲ နံသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ listerine ငုံတယ်။ listerine ငုံတာ ကောင်း. မကောင်းကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါအုံး။
ငုံတာကတော့ကောင်းပါတယ်။ သွားသေချာတိုက်ပြီးမှငုံဆေးသုံးရင်ပိုထိရောက်ပါတယ်။ Listerine ကို စက္ကန့် ၃၀ လောက်ငုံပြီးထွေးရင်၊ ဘက်တီးရီးယားပိုး ၈၀%လောက်လျော့သွားတယ်လို့သုတေသနတခုကဆိုပါ